Sidee usoo ceshan kartaa sawir ama muuqaal aad ka tirtay iPhone kaaga ama iPad kaaga.!! – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Mobile Apps, Tech News	 February 21, 2019 February 21, 2019 1 Minute
Sawiradda lagu keediyay taleefannada iyo qalabyada teknooloojiyadda waxey ka fiican yihiin kuwa lagu keediyay albumo sidii hore. Sababtoo ah waqtigaa rabto ayaad arki kartaa, majirto wax haleyn karo biyo iwm, si dhaqsi ah ayaad raadin kartaa.
Balse waxey ku xiran tahay haddii aadan tirtirin. lkn haddii ay dhacdo waad soo ceshan kartaa qaas ahaan haddii aad ka mid tahay bulshada isticmaasha iPhone ka ama iPad ka.
Halkee aadayaan kadib markaad tirto sawir ama muuqaal.?!!
Sida cad waxey aadayaan Meesha qashinka lagu rido( Recycle bin), waxeyna ku jirayaan muddo 30 maalmood ah.. haddii aadan soo ceshan si toos ayee utirmi doonaan.
Ma isticmaashaa iCloud.?!!
iCloud waxey sameysaa iney kuu keediso kuna tusto sawiradaada iyo muuqaaladaada qalab kasta oo Apple ay leedahay aad isticmaasho. Sidoo kale waxey sameysaa inaad soo ceshan karto sawiradaada oo ku jiray iCloud ka muddo yar kadib markii la tirtiro waxaadna kala xariiri kartaa Apple Support si laguu caawiyo.
Ma isticmaashaa iTunes.?!!
iTunes waxey sidoo kale kuu sameyneysaa in sawiradaada ama muuqaaladaada kuugu soo bandhigto qalab kasto aad isticmaasho qaasatan computer ka Mac ama Windows. waxaa laga yaabaa inaad sameysay backup folder ama si automatic ahaan u sameysnaa gudaha computer kaaga, soo fiiri haddii ay ku jiraan.
Intaan waxaa muhim ah inaad iPhone kaaga ama iPad kaaga aad u sameyso cinwaanka Apple ID aadna ku xirto iCloud kaaga ama iTunes kaaga, si aad uga badbaado lumidda sawiro ama muuqaalo muhim kuu ah.
Wixii faahfaahin ah ama fakir ah adigoo mahadsan comment ga ugu tag. Mahadsanid aqrintaada.
Previous Post Qiimaha iyo tilmaamaha uu wato mobile ka Galaxy S10:
Next Post Maxuu yahay Internetka Madow(Dark Web)!! Sidee loo isticmaalaa!!